Google Lens: Inona ity rindranasa ity ary inona no ilàna azy | Androidsis
Inona izany ary inona no azonao atao amin'ny Google Lens
Eder Ferreno | | Fampiharana Android, sary
Google Lens dia iray amin'ireo rindranasa ireo izay mahazo vahana amin'ny Android, indrindra satria mifanaraka amin'ny telefaona maro isaky ny mandeha izy. Ankoatry ny maha-fampiharana manan-danja amin'ny tetikadin'i Google. Noho io antony io dia efa niasa tamin'ny fanatsarana maro sy asa vaovao ao aminy ny orinasa, qizay azontsika jerena indraindray. Manaraka izany dia holazainay aminao ny zava-drehetra momba ity app ity.
Inona ny Google Lens ary inona no azontsika atao amin'ny fampiharana ity amin'ny Android? Ity no havalinay manaraka, mba hahafantaranao izay rehetra avelan'ity rindranasa ity hataonay, satria ny isan'ny fiasa no nitombo miaraka amin'ny fandehan'ny fotoana amin'ny fomba miavaka.
1 Inona ny Google Lens
2 Inona no azo ampiasaina azy?
Inona ny Google Lens
Google Lens dia fampiharana noforonin'i Google. Azo ampiasaina na amin'ny Android na amin'ny iOS izy io. Izy io dia miasa amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fakantsary finday sy ampiasaina hamantarana zavatra izy io izay anananao eo alohanao mandrakariva. Mila manondro azy ireo fotsiny isika mba hahafahan'ny fampiharana manao izany. Satria amin'ny fanondroana zavatra iray dia hanomboka handinika azy ianao ary hahafantatra ny momba azy. Raha vantany vao fantatrao hoe inona izany, dia hanome andiana hetsika hatao.
Ireo fihetsika ireo dia miankina amin'ny karazana zavatra notondroinay miaraka amin'ny fakantsary. Ka raha zavamaniry izy io, fanaka iray na lahatsoratra iray, dia afaka manao hetsika hafa mifanaraka amin'ny zavatra voafaritra manokana isika. Amin'ny tranga maro dia manana safidy mihoatra ny iray isika amin'izany. Azo atao izany satria ny Google Lens dia mifandray amin'ny rindranasa Google hafa, toy ny mpandika teny na ny mpanampy. Amin'izany no ahafahantsika mampiasa azy amin'ny telefaona.
Ny interface an'ny Google Lens dia toy ny an'ny fakantsary finday, na dia nahita bokotra dimy mitotaly aza izahay. Eo afovoany dia bokotra mandeha ho azy, izay hamakafakaina ireo sary. Etsy andaniny dia manana bokotra roa izahay, izay ampiasaina amin'ity tranga ity ho an'ny fikarohana manokana na hetsika hatao miaraka amin'ilay zavatra resahina izay nohadihadianay tamin'ny fampiharana.
Inona no azo ampiasaina azy?
Ny lisitry ny fiasa azontsika ampiasaina amin'ny Google Lens nitombo izany rehefa nandeha ny fotoana. Afaka manao zavatra bebe kokoa miaraka amin'ity rindranasa ity amin'ny Android isika, ankoatry ny hoe mandeha tsara kokoa izy io. Nihatsara tokoa ny asany, izay tsy isalasalana fa tena ilaina. Ireto misy zavatra azontsika atao:
Mandika lahatsoratra amin'ny fotoana tena izy rehefa manondro azy ireo amin'ny fampiharana ianao
Fampahalalana momba ny boky: Rehefa manondro boky ianao, Google Lens dia hikaroka abstract, hevitra ary rohy fikarohana ao amin'ny Google
Fitadiavana teny: Rehefa mamakafaka lahatsoratra iray isika dia afaka manindry teny manokana ary mikaroka azy ireo ao amin'ny Google
Manampia hetsika amin'ny kalandrie
Raha manondro nomeraon-telefaona iray isika dia afaka manao izany manao antso mivantana
Adikao amin'ny fotoana tena izy ny lahatsoratra: Ankoatry ny fisafidianana teny dia afaka mifantina lahatsoratra iray manontolo isika ary manana ny safidintsika ny maka tahaka azy
Fampahalalana momba ny biby na voninkazo: Amin'ny alàlan'ny fanondroana azy ireo, Google Lens dia hilaza amintsika ny kilasy na ny hazakazaka ary hanome antsika fidirana amin'ny fampahalalana bebe kokoa
Raha eo anoloan'ny trano fisakafoanana iray isika dia afaka mamaky hevitra momba azy io ankoatr'izay afaka mamakafaka ny menus mitovy aminy (haseho sary sy fampahalalana momba azy ireo izany)
Mitadiava vokatra an-tserasera hividianana azy ireo: Raha manondro zavatra manokana ianao dia azonao atao ny mitady azy amin'ny fivarotana an-tserasera amin'ny fotoana rehetra
Manampia fifandraisana avy amin'ny karatra fandraharahana raha manondro azy amin'ny Google Lens izahay
Ireto ny sasany amin'ireo lahasa lehibe ahafahantsika mankafy amin'ny fampiharana amin'ny Android. Izy io dia fampiharana iray izay manome fahafaha-manao betsaka amin'izany. Azontsika atao ny misintona azy maimaim-poana amin'ny finday avy amin'ny Google Play, ankoatry ny tsy fanaovana doka. Raha te hanao an'io dia mila mampiditra an'ity rohy ity fotsiny ianao:
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Inona izany ary inona no azonao atao amin'ny Google Lens
Manome Kingdom Rush Vengeance izahay: amidy mandritra ny 7 andro amin'ny € 3,19
Google Drive izao dia mamela anao hitahiry rakitra an-tserasera